I-inthanethi Franchise - Amathuba weTekhnoloji ye-Franchise | Franchiseek
I-Internet based Franchise
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»I-Internet based Franchise
Okufakiwe ku-Inthanethi Esekelwe Franchise
Ama-Franchise akamuva e-Intanethi
I-Intanethi ingenye yomthelela omkhulu emnothweni, nabantu abaningi baphendukela kuwebhu beyothenga imikhiqizo nezinsizakalo. I-Intanethi yinto eyenzeka emhlabeni wonke futhi nebhizinisi emhlabeni online likhula ngesivinini esikhulu.
Izinhlobo ze-Internet Franchise
I-Web Design Franchise - amabhizinisi amaningi aphendukela ku-inthanethi, okuthatha isisekelo samakhasimende abo afike ezingeni elisha lonke. Wonke amabhizinisi akufanele abe ngaphandle kwewebhusayithi futhi amabhizinisi amasha nama-franchise aqhamuka kweminye imikhakha azophendukela kuwe ukusiza ibhizinisi labo ukwenza ukubonakala okuhle kakhulu kokuqala.
Ama-Telecom ama-franchise - lokhu kufaka izinsiza ze-VoIP zamakhasimende, izinsizakalo zamakhasimende kanye nokuthumela izingcingo. Nge-frcomise ye-telecoms, ugcina i-CRM yamakhasimende akho.
Izinsiza ze-Virtual PA - Kunenqwaba yezindawo ezihlukile ze-PA franchise, njenge-Pink Spaghetti, lapho futhi ukuhambela amaklayenti nokuxoxa ngezidingo zawo ubuso nobuso, uzothumela i-PR yamakhasimende futhi isingathe izidingo zawo zansuku zonke online.
Ukusetshenziswa kwemali kwi-Inthanethi kuyanda futhi kusetshenziselwe ukuqhubeka. Manje yisikhathi esifanele sokutshala imali kwi-franchise esekwe kwi-intanethi, evame ukusebenza njenge-franchise yasekhaya nayo.
Enye yezinzuzo ze-Internet based Franchise, ukuthi uzenzele ibhizinisi lakho, kodwa hhayi wedwa. Ngokungafani nesiqalo sebhizinisi le-inthanethi, i-internet franchise iyimodeli yebhizinisi efakazelwe neliphumelelayo eye yaphindwa yenziwa kuwo wonke ama-franchisees amaningi nezindawo zawo.